निर्मलाको पोस्टर च्यात्ने नै हुन् त उनका हत्यारा, किन बन्दै छ सरकार दिनप्रतिदिन निरंकुश ? – Medianp
निर्मलाको पोस्टर च्यात्ने नै हुन् त उनका हत्यारा, किन बन्दै छ सरकार दिनप्रतिदिन निरंकुश ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, मङि्सर १६, २०७५१०:३३0
काठमाडौं, १६ मंसिर । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराको चार महिना बितिसक्दा पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । यो प्रकरण अब राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकी एक पदाधिकारीले निर्मला पन्तको हत्यामा राज्यले सही ढंगले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको भन्दै राष्ट्रसंघले यसको छानबिन थाल्ने बताएपछि केपी ओली सरकार बदनाम हुन पुगेको छ । यो प्रकरणलाई लिएर तीन महिनादेखि आन्दोलन जारी छ । फेरि कञ्चनपुरवासीले आजदेखि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘निर्मलालाई न्याय’ भन्दै लेखिएका पोस्टर र पम्पलेट अहिले देशव्यापी बनाइएको छ । काठमाडांैबाट सुरु भएको यो अभियान पोखरा हुँदै कञ्चनपुर पुगेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका ‘एमएमआर’ ग्रुपले राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न सहरमा टाँसेको निर्मलाको पोस्टर सरकारले प्रहरी लगाएर च्यात्दै आएको छ । जसको अहिले तीव्र निन्दा र आलोचना गरिएको छ ।
‘काठमाडौं, पोखरालगायतका स्थानमा निर्मलालाई न्याय लेखिएका पोस्टरहरु च्यातिएका छन् । यो संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी धारा १७९२० को उल्लंघन हो । प्रहरीलाई निर्मलालाई न्याय लेखिएका पोस्टर च्यात्ने आदेश कसले दियो ? ोस्टर च्यात्नेलाई कारबाही होस्’ भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
‘न्याय माग्न नपाउनु हदैसम्मको निरंकुशता हो । न्याय माग्न नपाउने गरी नागरिक बन्न कोही पनि चाहँदैन । न्याय माग्नेका विरुद्धको आतंकवाद चाहिँदैन’ भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा सरकार र प्रहरीको आलोचना भएको छ । प्रहरी नै टाँसेको पोस्टर च्यात्न खटिएपछि आमजनताले प्रहरी नै निर्मलाको हत्यारा हो कि भन्ने आशंका गर्न थालेका छन् ।
युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हानले आज प्रधानमन्त्री दम्पतीसहित १५ सयलाई आशीर्वाद दिने र पवित्र जल छर्कने
नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडीलाई कोरिया उडाउन रोक्ने को ?